पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएका बेला किन भेटे ओलीले कांग्रेस नेतालाई ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएका बेला किन भेटे ओलीले कांग्रेस नेतालाई ?
फागुन १५ गते, २०७६ - १३:०६
काठमाडौं । पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएका बेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीले कांग्रेस नेता शेखर कोइरालासँग विशेष भेटघाट गरेका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस नेता कोइरालासँग पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे गम्भिर छलफल गरेका हुन् ।
बालुवाटार स्रोतले जनाएअनुसार दुई नेताबीच करिब डेढ घण्टा कुराकानी भएको थियो । ओली र कोइरालाबीच बिहान साढे ८ बजेदेखि कुराकानी भएको हाे।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस प्रभावशाली नेतासँग भएको भेटघाटलाई निकै अर्थपूर्णमा रुपमा लिइएको छ । नेकपा सचिवालय बैठकले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय लिएसँगै पार्टीभित्र देखिएको विवादका बीच ओलीले कांग्रेस नेतासँग भेटघाट गरेका हुन् ।
स्रोतले जनाएअनुसार कोइरालासँग ओलीले आफुँमाथि चौतर्फी घेराबन्दी भएको भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले सरकारमाथि भईरहेको गम्भिर षडयन्त्रले देशलाई नै हानी पुग्ने भन्दै सहयोगको कुराकानी गरेको बुझिएको छ ।
जवाफमा कोइरालाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिन सुझाएको कोइराला निकट स्रोतले जनायो । २ वर्षे कार्यकाल फलदायी नहुनु र पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चुलिनुमा ओलीले राजीनामा दिएर निकास खोज्न कोइरालाले सुझाव दिएका थिए ।
फागुन १५ गते, २०७६ - १३:०६ मा प्रकाशित